रङ्गीचङ्गी सरस्वतीको मूर्ति (फोटोफिचर) - फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
रङ्गीचङ्गी सरस्वतीको मूर्ति (फोटोफिचर)
माघ २७, २०७५ शब्द/तस्बिर : शाहीमान राई
जनकपुर — मिथिला क्षेत्रमा सरस्वतीको पूजाका लागि मूर्तिकारले कलात्मक तरिकाबाट रंगिविरंगी सरस्वतीको मूर्ति बनाउने गरेका छन् । सरस्वतीको हातमा विणा, पुस्तक तथा वाहनको रूपमा हाँस लगायत विम्बात्मक र प्रतिकात्मक स्वरूपबाट निर्मित कलात्मक मूर्ति मञ्चमा राखेर धूप, बत्ती, फूलमाला र अबिर लगाएर पूजा गर्ने चलन छ ।
प्रकाशित : माघ २७, २०७५ १४:५४
वसन्तपञ्चमीका दिन प्रदेश २ मा विद्याकी देवी सरस्वतीको भव्य पूजाआजा गरी मनाइन्छ । सरस्वती पूजाका निम्ति सरस्वतीको प्रतीकका रूपमा कलाकारले आकर्षक, कलात्मक, रङ्गीबिरङ्गी मूर्ति बनाउँछन् ।
आइतबार श्रीपञ्चमीको दिन मुलुकभर शैक्षिक संस्थाहरूमा सरस्वती पूजा मनाइँदैछ । त्यसमध्ये श्रीपञ्चमीलाई पर्वकै रूपमा तराई–मधेस क्षेत्रमा धूमधामसँग सरस्वती पूजा गरेर मनाउने प्रचलन छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिइरहेका सरकारी चिकित्सक प्रहरी नियन्त्रणमा
माघ २७, २०७५ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आइतबार शान्तिपूर्ण धर्ना दिइरहेका चिकित्सकहरु पक्राउ परेका छन् ।सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले आफूसहित २५ जना चिकित्सकलाई प्रहरीले मन्त्रालयबाटै प्रक्राउ गरेको जानकारी दिए ।
गोडानले कर्मचारी समायोजनको विषयमा असहमति जनाउँदै घर्ना बसेको थियो। उनिहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस अघि कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयमा गोडानसँग गरेको सझौता लागु हुनुपर्ने जनाउँदै शान्तिपूर्ण धर्ना दिइरहेका थिए ।
'प्रहरीले लाठीचार्ज गर्‍यो, हामी लाई नराम्ररी पिट्यो,' प्रहरी नियन्त्रणमा रहे‍का डा. पाण्डेले फोनमा भने । नियन्त्रणमा लिएर चिकित्सकहरुलाई प्रहरीले हाल पुलिस क्लबमा राखेको उनले बताए।
प्रकाशित : माघ २७, २०७५ १४:३४